Chautari Daily » काठमाडौंमा लकडाउन थपियो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्बिएको छ । निषेधाज्ञा वैशाख २९ गतेसम्म लम्ब्याइएको हो ।
मंगलबार बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छलफलपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा बुधबार सकिँदै गर्दा एक हप्ता थपिएको हो । साथै निषेधाज्ञालाई थप व्यवस्थित र कडाइसमेत गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १०:५३
के कारणले आउँछ अनुहारमा डंडीफोर ? यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस्
कतारमा नियमित उडान, भाडादर किन यति महंगाे?
कहिले देखि खुल्छन नेपालमा आन्तरिक उडानहरू ? हेर्नुहोस्
धादिङका फुटबलर सुमन श्रेष्ठ मृत अवस्थामा भेटिए
महोत्तरीमा दाइजो नदिएको निहुँमा दुलहीमाथि कु’टपि’ट
क्रेनमा करेण्ट लाग्दा २ को मृत्यु, २ घाईते